Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Isinyathelo ngesinyathelo Umhlahlandlela Wokulungisa nokuthi Ungathenga Kanjani ompompi ku-inthanethi
2020 / 11 / 19 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 4822 0
Ukuvuza okuncane okuvela empompini okuyiphutha kungavela njengokuthuthuka okuncane, kepha empeleni kungakubiza izinkulungwane zemali ngonyaka. Ngaphambi kokukhetha thenga ompompi online kuzoba ngcono ukuthi wazi ukuthi ungalandelela kanjani ithephu engalungile. Ezimweni eziningi, kungumsebenzi we-DIY futhi ungakwenza ngaphandle kosizo lochwepheshe. Kulokhu ukubhala sizokuchaza ukuthi ungaluhlola kanjani uhlelo lwakho lwamanzi ukuthola amaphutha amancane, ukhethe okungcono kakhulu kompompi, bese ushintsha ucezu olungalungile. Ukuphela kokufanele ukwenze ukufunda lokhu kubhala ngokunakekela nokugxila.
Kungani ulandela umkhondo wephutha?
Kubaluleke ngaphezu kokuthola iphutha nokushintsha umpompi kungenjalo kungaba yinkinga kuwe ngokuzayo. Okungelapheka esigabeni sokuqala ngemali encane enganakwa kungakubiza isamba esikhulu uma uqhubeka nokungakunaki. Uma usulilandelile iphutha, okumele ukwenze nje ukukufuna ompompi besaphulelo ku-inthanethi.
Izizathu zompompi abavuzayo
Ompompi kulula kakhulu ukukulungisa uma nje uqonde kahle ukuthi zisebenza kanjani nokuthi wenzeni ukuzilungisa. Okulandelayo ngezinye zezizathu zokuthi umpompi wakho ungaqala ukuvuza:
Ompompi baqala ukuvuza lapho iwasha, amasongo e-O, noma izimpawu ngaphakathi kompompi kungcola ngemfucumfucu, embozwe ukufakwa okunamafutha, noma kumane nje kugugile. Ukubhekana nompompi kulula, kepha-ke, kuyehluka ngokuthembela ohlotsheni lwompompi onawo.
Ngokushesha nje lapho uqonda ukwakheka kompompi wakho, ungawuthatha kahle umpompi, ubeke insiza yokuvuza, bese ngemuva kwalokho ushintshe izinto ezisetshenzisiwe noma izinto eziqoqekile ezingcolile. Futhi kuzoba lula ukuthola okusha uma iphutha selilandelwe, ngokwesibonelo, uma kuyiphutha lokuxuba nakanjani uzofuna okungabizi ompompi bokuxuba abathengiswa ku-inthanethi.
Amaphuzu okufanele uwaqaphele ngaphambi kokushintsha ompompi
Izici ezilandelayo kufanele zicatshangelwe ngaphambi kokukhetha ukushintsha ompompi:
Nquma Ukuhlelwa Kompompi: Kunezitayela ezi-4 eziyisisekelo zokuthepha: isitayela sebhola, igobolondo, i-disc, kanye nokucindezela. Kwesinye isikhathi uhlobo lwompompi lungaqondakala ngokubukeka kwangaphandle, noma kunjalo, imvamisa, umpompi kufanele uhlanganiswe ukuze unqume ukuthi luhlobo luni kampompi.
Hlukana Nompompi: Iziphathimandla ezifanayo ezijwayelekile zifaka zonke izinhlobo zompompi lapho ziqala ukukhipha umpompi ngaphandle kwensizakalo yokulungisa noma ukufaka esikhundleni. Gcina zonke izinto kanye nefomethi ngendlela ozihlukanisa ngayo. Lokhu kuzonisiza nobabili ukuthi niphinde nibuyele empompini futhi nibone nezinto ezizoshintshwa.
Kungani uthintana nochwepheshe?
Yize imisebenzi yokulungisa okukhulunywe ngayo ngenhla iyimisebenzi emincane noma emincane ye-DIY kepha ukonga isikhathi sakho esiyigugu futhi ufeze inhloso efanele kufanele uxhumane nochwepheshe weplamba. Ungonga imali ngokwenza ngokuzenzela kepha uma umsebenzi wokulungisa ungahambi kahle ungakubiza kabili.
Siyethemba ukuthi imihlahlandlela engenhla izokusiza nakanjani noma kunini lapho ufuna ukushintsha ompompi noma ompompi bakho kwezomnotho.
Edlule :: UNGAYIKHETHA KANJANI INDLELA YOKUNGCWELE YOKUNGCOLA Olandelayo: Izindlela eziholela ekukhetheni okuhle kompompi wasekhishini
2020 / 11 / 19 5291
2020 / 11 / 18 5033